Izindaba ukuthi kakhulu engeza izindebe kungaba ekhaya Ngemizuzwana, ngaphandle kokuhlinzwa namafa kuyabiza, iye yashukumisa emhlabeni muva nje. Le idivayisi ekhethekile - plumper, ngezinye izikhathi obizwa ngokuthi i-futha cleaner, "Fullipsom" noma nje cleaner. Uma ukholelwa ukuthi ukukhangisa, leli thuluzi ayinakho Izimo futhi ngokushesha. Ingabe kuyiqiniso ukuthi "Fullips" udebe impendulo kuyinto omuhle kakhulu njengoba becabanga ngalokhu Ochwepheshe kudivayisi?
Yokusetshenziswa futhi hype
"Fullips" - idivayisi umsindo osheshayo nengebuhlungu lip nokwengezwa. Umthelela kufinyelelwa isimiso cleaner futha. Plamper kudala ingcindezi ethile, ngakho igazi ageleza eya izingxenye wayefisa ebusweni, futhi ngemva kwamahora ambalwa ngemuva isicelo, singakwazi ukugcina ukuvuvukala zemvelo. Indlela yokusebenzisa "Fullips" okufanayo lip nokwengezwa? Kulula kabi - idivayisi kufanele awulethe izindebe zakhe kancane cindezela, abancela emoyeni. Uma ifomu uvalwe yayicindezele isikhumba, linda imizuzwana 20-30 ke ngobumnene uyisuse. inqubo liphindwe izikhathi 2-3 uma kunesidingo. Khona-ke umphumela ukumelana inikezwa amahora ambalwa. Umenzi uncoma ukuthi eminye ugcizelele lakhulisiwe lip isicwebezelisi noma lipstick.
What do amantombazane baye bazama "Fullips" Lip
Incazelo kule divayisi futhi iziqondiso zalo ukusetshenziswa kukhona zikhange kakhulu. Bathini mayelana abesifazane entsha real namantombazane? Kunzima ukukholelwa, kodwa "Fullips" Lip Izibuyekezo kuyinto ingxenye enkulu omuhle. Ngisho owaziwa kakhulu futhi izintokazi nezicebile ukuzethemba bathi lo mshini iyasebenza. Futhi liyamangalisa: nje imizuzu embalwa, futhi izindebe bheka engengaphansi ephumelela ukwedlula ngemva ukuhlinzwa isikhumba.
ngokuvamile Ngingakusebenzisa kanjani le "Fullips" udebe? Izibuyekezo abanikazi abaningi kule divayisi etha ukuthi sokufuna ukuhlala phezulu, basebenzisa imfihlo isikhali izikhathi zabo eziningana ngosuku. Umkhiqizi esitatimendeni olusemthethweni akazange kabusha ukusetshenziswa "Fullipsa" emini. Kubalulekile ukususa kuqala ukwakheka ngokusebenzisa izindebe kuphela, futhi kusobala ukuthi ulandele izincomo isikhathi ukusetshenziswa kudivayisi. Nokho Plamper - lokhu okusungulile ngezikhathi ezikhethekile kanye ukulinga ukubukeka kwabo. Inhloso Its main - ukushintsha izindebe phambi kwezithombe, noma ukwandisa them for nye izenzakalo zemikhosi, amaqembu.
Ingabe kuyiqiniso ukuthi "Fullips" udebe elimazayo?
Abanye abathandi yemvelo ubuhle isimangalo sokuthi Plamper ngokusebezisa njalo ungakulimaza impilo. Ingabe kuyiqiniso lokhu? Izazi zikholelwa ukuthi ukusebenzisa le divayisi nayo yonke imithetho kanye nezincomo umenzi hhayi kungabangela umonakalo. Isitatimende ukuthi "Fullips" Lip luyingozi, ayiqinisekiswanga. Okuwukuphela ohlangothini umphumela ukusetshenziswa okungafanele kanye ngokweqile izesekeli - ukulimaza. Nokho, lezi nemihuzuko kukhona isici yezimonyo kuphela, futhi ngokuvamile kwenzeke izinsukwana ngaphandle nemiphumela. Kunoma ikuphi Plamper - indlela ephephile kuka ukuhlinzwa noma umjovo amalungiselelo lip nokwengezwa.
Lapho ukuthenga "Fullips" nokuthi Kubiza?
Namuhla, emakethe ungathola izesekeli lip nokwengezwa izinhlobo ezintathu, bavame ithengiswe kit. Qonda onjani-accessory bakwamukele best ngawe, akunakwenzeka inqobo nje uma ungazami yilowo nalowo kubo - konke kuncike ukuma kwemvelo umlomo. Uma unquma ukuthenga "Fullips" udebe, intengo uqiniseka ukujabulisa, ngokuvamile kuba ku ezahlukene ruble 250-500. Ukuthengiswa lokhu kwakwenqatshelwe emangalisayo ezitolo eziningi izimonyo kanye nemikhiqizo ubuhle kanye phezu amawebhusayithi. Kukhona isizwe-wide boutiques virtual lapho ungakwazi ukuthenga "Fullips" nge ukulethwa kunoma edolobheni eRussia. Uma dream mayelana izindebe kwakhahlela , futhi musa alinge izindlela ezinkulu, kufanele nakanjani sizame kule divayisi. Ngisho noma imiphumela musa ugqozi, ayinayo ukuba ecasukile, ngoba Plamper kuyinto ngempela ashibhe. Qiniseka ukuzama "Fullips" udebe, izibuyekezo abathengi abaningi kulo mkhiqizo ugqozi ucwaningo olusha futhi umsebenzi ngokwakho!
Kuvumelana kwalo ne Guerlain Idylle
Ezikhangayo Ezingokwemvelo Kanye Nezenzo komlando Sardinia
Pasta "Soultz" izinwele ukukhula: ukubuyekezwa, yokusetshenziswa